Warshadeenu waxay kaqeyb gashay carwo sanadkaan ， waxaan soo bandhignay albaabkeena muraayada qaboojiyaha cusub ， door albaabka muraayada mashiinka glass macaamiil badan ayaa noogu timid qolkeena, waxay muujiyeen xiise badan albaabkeena galaaska ， waxaa jira calaamado muujinaya in warshadeena korayso.
Deqing Yuebang Glass Co., Ltd. ayaa bilaabay dhismaha warshadan cusub, oo la filayo in la soo gabagabeeyo bisha Diseembar 2021. Warshadda cusub waxay ku fadhidaa dhul dhan 15,000 oo mitir murabac ah.waxaana ku jira laba dabaq oo aqoon isweydaarsi ah iyo afar dabaq oo xafiiska ah. Marka warshadda cusub la aasaaso ka dib, waxaannu ku dari doonnaa 1more insul ...
LED Glass Door waa badeecad heer sare ah oo shirkaddeena u soo saartay macaamiisha berrinka qaboojiyaha. Badeecaddu waxay isticmaashaa 4mm Muraayad Low-E ah oo Muraayadaysan + 4mm Muraayad Dareeysan, Astaamaha LED-ka ayaa qalooca ama lagu dhejiyaa Muraayadda oo lagu dhejiyaa dhexda muraayadan 2da ah. Caadi ahaan saameynta bandhiggu waa wax badan ...
Imaanshaha CUSUB ee Sebtembar - Sawir gacmeedka Rinjiyeynta Farshaxan la'aanta ah ee Wareegga Wareegga
Ka dib markii la hirgeliyey iridda galaaska geeska geeska oo ay la socoto Wax-ku-darka Luulyo. Maanta, waxaan rabnaa inaan kuu soo bandhigno walaashiis, Round Corner Glass Door. Qeexitaannada Hoos ku xusan: Habee Rinjiyeynta Lagu Heli Karo Meel Lagu Dari Karo iyo Aluminium Qaab Cabbirka La Isku-hagaajin Karo ee Double ama Triple Glazin ah ...
Imaanshaha Cusub ee Luulyo - Jidhka Square Corner Talaajo / Albaabka Muraayadaha Qaboojiyaha
Iyada oo ay sii kordheyso rabitaanka qurxinta, YB Glass waxay diirada saareysaa wax soo saarka iyo qaabeynta bannaanka. Maanta, waxaan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno naqshad cusub - Frameless Glass Door with Add-on Handle. Daabacaadda Xarka Hareeraha Ku-daridda Aluminium ee Aluminium Qaab-dhismeedka Low-E ah
Uumiga Ma ogeyd in qaboojiyaha albaabka dhalada uu ka sameysmo uumis (biyo) banaanka muraayadda meelaha huurka badan leh? Tani kaliya maahan muuqaal xun, laakiin waxay sababi kartaa biyo inay ka samaysmaan sagxaddaada adag, taasoo sababa dhaawac aan laga soo kaban karin ama ka dhigaysa dabaqyada dusha sare si qatar ah u simbiriirixan. Maaha lo ...